Noraran'i Failandy ny fampiasana arintany hamokatra herinaratra alohan'ny 2030 | Green Renewable
Tomàs Bigordà | | Biofuel, Biomassa, Angovo azo havaozina, Tontolo_iainana
Mifanohitra amin'ny tahotra izay tsapan'ny mpiaro ny tontolo iainana momba ny fandresen'i Trump tamin'ny fifidianana tany Etazonia, hitantsika ny fomba manohy mitondra vaovao tsara ho antsika ny firenena sasany amin'ny fikirizantsika hatrany amin'ny lalan'izy ireo mankany amin'ny tontolo maitso sy maitso. Amin'ity tranga ity dia i Failandy no fanadihadiana mandrara, araka ny lalàna, ny arina hamokatra herinaratra alohan'ny 2030. Raha tany amin'ny firenena toa an'i Espana dia nitombo 23% ny fandoroana arintany tamin'ny taona lasa, te-hitady fomba hafa maitso i Finlandia, mieritreritra ny ho avin'ny firenena.
Tamin'ny volana desambra lasa teo, ny governemanta finnish dia nanolotra drafitra stratejika nasionaly vaovao ho an'ny sehatry ny angovo izay voatanisa, ankoatry ny fepetra hafa raràn'ny lalàna ny fampiasana arintany ho an'ny famokarana herinaratra manomboka amin'ny 2030.
1 Ny sori-dalan'ny governemanta failandey
2 Ny ezaky ny firenena hafa
Ny sori-dalan'ny governemanta failandey
Raha nankatoavin'ny Parlemanta, izay manana ny maro an'isa mampahazo aina, Failandy no nanjary firenena voalohany teto an-tany nanao lalàna momba ny fandaozana karbonina tanteraka ho loharanom-angovo, hahafahana mamaly ny tanjony amin'ny fampihenana ny famoahana entona entona.
Ny drafitra stratejika natolotra dia manondro fanoloran-tena mafy amin'ny angovo azo havaozina, miaraka amin'ny fanamafisana manokana ny biofuels, ary ny fampihenana tsikelikely ny fampiasana solika fôsily.
Manomboka izao, ny fananganana toby famokarana herinaratra mifototra amin'ity akora ity dia ho malemy, ary ny mampifanaraka fotodrafitrasa ny toby famokarana herinaratra ankehitriny ary miasa mba hiasa miaraka amin'ny akora miorina amin'ny biomass. Rehefa tonga ny datin'ny fanesorana tanteraka ny arina dia nanambara izany ny mpanatanteraka Ny angovo azo havaozina dia mitentina 50% amin'ny angovo ampiasaina rehetra ao amin'ny firenena. Izy ireo koa dia mikasa ny hahatratra tarehimarika manakaiky ny 100% amin'ny 2050.
Izy io koa dia mikendry ny hampizara roa ny fanjifana solika fôsily, toy ny lasantsy sy ny gazoala, amin'ny taona 2030 raha ampitahaina amin'ny haavo 2005 sy ampitomboina miaraka amin'izay ny isan-jaton'ny biofuel toy ny étanol manomboka amin'ny 13,5% ka hatramin'ny 30% ankehitriny.
Mba hanaovana izany dia manolo-kevitra ny hampifantoka ny fandrisihana ho an'ny daholobe hamatsy vola fiara madio kokoa ary manohana famatsiam-bola amin'ny ozinina vaovao.
Ny fitaterana dia iray amin'ireo sehatr'asa betsaka indrindra Famoahana entona entona ary noho io antony io ihany koa dia iray amin'ireo tena voakasiky ny drafitra stratejika an'ny Executive Finnish.
Ny tanjon'ny governemanta Helsinki dia ny amin'ny 2030 farafahakeliny 250.000 fiara elektrika ary 50.000 hafa entin'ny lasantsy, ao amin'ny firenena misy mponina 5,5 tapitrisa.
Izy io koa dia mikasa ny hampirisika ny fanavaozana ny fiaramanidina, ny faharoa miaraka amin'ny fiara tranainy indrindra any Eropa, miaraka amin'ny salanisa 11,7 taona, hoy ny minisitry ny Fitaterana, Anne Berner.
Ny ezaky ny firenena hafa
Ny planin'i Finlandia dia be faniriana, nefa Tsy ny firenena irery no manao ezaka hampihenana ny fandefasana entona entona izay mampitombo ny fiovan'ny toetrandro. Ohatra, Kanada dia manana drafitra mitovy amin'ny an'i Failandy raha momba ny arina, fa mora kokoa.
Etsy ankilany, na dia mety hianjera aza izany, iray amin'ireo firenena mampiasa vola be indrindra amin'ny angovo azo havaozina dia i Sina. Eny, ny firenena mpandoto indrindra faharoa indrindra eto an-tany dia nahatsapa fa tsy maintsy miova izy ireo raha te hiantoka ny fahasalaman'ny olom-pireneny ary tamin'ny 2013 dia mihoatra ny angovo azo havaozina izay novokarin'ny solika fôsily tamin'ny voalohany.
Toa misy hazavana any amin'ny faran'ny tonelina solika fosil ary ireo firenena, mihombo hatrany, tsapan'izy ireo fa mila ovaina ny maodely famokarana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Noraran'i Failandy ny fampiasana arintany hamokatra herinaratra alohan'ny 2030
Tsy afaka mandeha irery amin'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra i Norvezy. Na miaraka amin'ny biomassa.